A gam akporo dị na ihe karịrị 10% nke gam akporo ekwentị | Gam akporosis
Mgbe ọnwa na-enweghị nkesa data, Google emesịa kesara data ọhụrụ na otu esi ekesa nsụgharị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ n'ahịa Ọnwa ndị a enwere ọtụtụ nkọwa banyere ya. Ihe kachasị na gam akporo gam akporo na-agagharị nwayọ nwayọ na ụlọ ọrụ achọghị igosi data a. N'ikpeazụ, anyị nwere ozi ọhụụ ọhụrụ a.
Gam akporo Oreo na-ama okpueze dị ka ndị kasị eji version nke sistemụ Ruo ugbu a. Mgbe gam akporo gam akporo nwere ezi mmetụta, gafere 10% nke oke ahịa. Ozi ọma maka ụdị a, nke na-ahụ ka nnabata ya si dị mma ruo ugbu a.
Oge ikpeazu anyị nwere data, ọ ga-ekwe omume ịmatu na Android Oreo ga-abụ ụdị kachasị eji eme ihe n'oge na-adịghị anya. Nke a mechara gafee. Ọ gbagoro na ọnọdụ mbụ ya na òkè nke 28,3%. Ọ na-ahapụ gam akporo Nougat dị n'azụ, nke na-anọ n'ọnọdụ nke abụọ na 19,3%. Ya mere ọdịiche ndị ahụ dị ịrịba ama.
Maka gam akporo achịcha enwerekwa ozi ọma, ebe ọ bụ na a na-eme ya na òkè 10,4%. Nke a bụ ozi ọma, dịka ọ pụtara na ọ na-ekesa okpukpu abụọ karịa Oreo. Yabụ na ọ dị ka ọ nwetala ezigbo ije ugbu a mgbe ọ na - enweta mmelite. A na - etinye ya dị ka ụdị nke ise a kacha eji eme ihe.
N'ihu nke Android achịcha anyị ka na-ahụ Marshmallow na Lollipop, emere ya na 16,9% na 14,5% nke ahia, karị. Ọ bụ ezie na ebe ndị a dị anya adịlarị belatara. Yabụ enwere ike na n'ime ọnwa ole na ole, ha ga-akwụsịrịrị nke kachasị ọhụrụ.
Mgbe ọtụtụ ọnwa na-enweghị data, oge ikpeazụ ha bipụtara bụ n’ọnwa Ọktọba, mgbe gam akporo ọ pụtaghị na data a, Google egosila ozi a ọzọ. Olileanya bụ na anyị nwere data kwa ọnwa site n'aka gị. Yabụ na anyị nwere olile anya na ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụta ha kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Ihe karịrị 10% nke ekwentị nwere gam akporo
Google Play Awards 2019: Ndị a bụ ngwa kachasị mma nke afọ